नयाँ एयरपोर्ट भन्सार नियम :विदेशबाट नेपाल आउदा यी सामानमा लाग्ने भयो भन्सार, कति..? - Nepali in Australia
September 19, 2021 autherLeaveaComment on नयाँ एयरपोर्ट भन्सार नियम :विदेशबाट नेपाल आउदा यी सामानमा लाग्ने भयो भन्सार, कति..?
काठमाडौं । के तपाई वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ ? कुन सामान नेपाल ल्याउँदा कति रुपैंया भन्सार तिर्नुपर्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाइको लागि यो जानकारी महत्वपूर्ण हुनेछ । भन्सार विभागले पछिल्लो समय कायम गरेको भन्सार दररेट बारे जानकारी दिंदैछौं ।
केपी ओलीको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सकिएन भने राजनीतिबाट स’न्यास लिन्छुँ : विरोध खतिवडा